2 in 1 hifu milina
808nm diode tamin'ny laser
Nono fahafahana Machine
Derma-roller sy Derma penina
HIFU fivaviana hanenjanany
Dona ara-batana onja fitsaboana vatana MAC fanaintainana fitsaboana ...
HIFU fivaviana hanenjanany Machine hanala fivaviana, con ...
Hydrafacial oxygène hoditra manadio milina amin'ny hatsaran-tarehy ...
Q-ND Switch YAG 1064 nm 532nm Laser hatsaran-tarehy ara-pitsaboana milina U-SQ1
Tattoo fanesorana, hoditra rejuvenation, tamin'ny laser
♦ 12 mirefy efijery lehibe, 270 ° rotatable
♦ ambony izany fitsipika izany aluminium mafy akorany
♦ 2000W fahan'ny avo fahefana
♦ 100% Korea dehibe 7 jointed hazavana fifindran'ny sandry
♦ 8ns ± 2ns fitepon'ny fony sakany, manimba hoditra madinika
♦ 1- 10Hz mafy fitsaboana mahomby
Style: amin'ny toerana
Place ny Origin: Guangzhou, Shina (Tanibe)
Marika Name: Urbeauty
Model Number: U-SQ1
Endri-javatra: ny fanesorana mpanome loko, hoditra Rejuvenation, Tattoo Removal, tombokavatsa tamin'ny laser fanesorana fitaovana
milina size: 68 * 40 * 82cm
Package :: 100 * 115 * 50 sm
Machine Gross Weight: 75kg
nampirina entana lanja: 105kg
nampirina entana fomba: hazo tranga
Machine karazana: tombokavatsa tamin'ny laser fanesorana fitaovana
Halavan'ny onjam: 1064nm, 532nm
Arm: 7-mpiara sandriny
Hihena rafitra: ny rano sy ny rivotra hihena hihena ary condense
Q-jiro Laser ND YAG Laser- Q jiro ND: yag tamin'ny laser
tombokavatsa tamin'ny laser fanesorana fitaovana
Main Function Tattoo fanesorana
Beauty Center / Tattoo Removal
Hita ny Fitsaboana
amin'ny hery avo ND yag fanesorana tombokavatsa tamin'ny laser milina F: jiro
Dermis loko, toy ny lentigines, manga na mainty tatoazy, eyebrow loko.
Epiderme loko, toy ny freckle, ambony fleck sy mavo, mena, volontsôkôlà tatoazy, molotra loko
Light loharano Q-Switch ND: YAG mafy-panjakana tamin'ny laser
halavan'ny onjam isan-karazany 1064nm, 532nm
Energy ambaratonga 200-1500mj
Pulse Duration 8 ± 2ns
Pulse tahan'ny 1-10Hz Adjustable
machien lafiny 68cm × 40cm 82cm ×
fonosana habe 100 * 50 * 115cm
milina Net lanja 75kg
fonosana lanja 105kg
Power fitakiana AC110-240V, 50HZ
high quality ND yag tamin'ny laser volo epilator fanesorana fitaovana 1. Spot haben'ny: 1-8mm Adjustable
2. Pulse angovo: 200-1500mj
3. Pulse Rate: 1-10 Hz, isaky ny afaka manampy amin'ny 1 Hz
Red Light mikendry ny toerana: amin'ny hery avo ND yag fanesorana tombokavatsa tamin'ny laser milina F: jiro
Fitsaboana Spot Size amin'ny Handpiece: 1-8mm
Fitsipiky ny fitsaboana
1. Therapy ny epiderme sy dermis loko
Mampiasa ny mipoaka vokatry ny Nd: YAG tamin'ny laser, ny tamin'ny laser vonton'ny ny epiderme ho any amin'ny dermis izay ahitana habetsaky ny mpanome loko bahoaka. Hatramin'ny tamin'ny laser pulses in nanosecond fa amin'ny faran'izay avo angovo, ny loko bahoaka nitifitra nivonto haingana sy ny fialan-tsasatra ho madinika, izay ho fongotra amin'ny alalan'ny rafitra metabolic.
2. Therapy ny dilatation ny capillary sambo
Mampiasa ny hafanana vokatry ny Nd: Yag Laser ,, ny tamin'ny laser dia variana ny hemachrome ao amin'ny capillary vilany, dia ny capillary sambo ho voasakana sy manjavona.
1. Tsy ratsy ny volo sy ny ara-dalàna follicle hoditra, tsy namela holatra.
Hi-2.The farany tamin'ny laser teknolojia ny fipoahana tao amin'ny indray mipi.
3.Short mitondra fotoana sy mora fandidiana
4. high quality-panjakana mifehy mafy tamin'ny laser mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
5. ordinatera amin'ny LCD lehibe
6. Tiny fahatsapana fanaintainana, l'anesthésie dia tsy ilaina amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra
7. Tsy misy haka aina amin'izay mahazatra sy ny fahatapahana ny asa, tsy misy vokany.
8. marary sy ny fifadian-kanina be dia be fiverenan'ny fampiasam-bola.
high quality ND yag tamin'ny laser volo epilator fanesorana fitaovana
Previous: Oxygen infusion facial equipment U-G228A
Misy ve ato aminareo Warranty?
Eny Manana isika. 12 volana fiantohana amin'ny milina mpampiantrano no omena. Enim-bolana maimaim-poana ho an'ny fiantohana fanoloana famohana, fitsaboana-doha, sy ny faritra sasany.
Manao ahoana ny fivarotana rehefa avy-fanompoana?
Manana ekipa matihanina teknolojia fanohanana ho an'ny asa ara-potoana. Afaka mahazo ny fanampiana ilainao an-telefaonina tatỳ aoriana, webcam,-tserasera amin'ny chat (lahateny Google, Facebook, Skype). Mba andefaso olona izahay indray mandeha ny milina manam-olana. Serivisy tsara indrindra no nanatitra.
Ho mampianatra ny fomba fampiasana ny milina?
Eny, afaka manome feno boky mpampiasa sy ny fampiasana lahatsary ho an'ny fampianarana sy ny fampiharana. Ary ny mpanolo-tsaina 24/7 aterineto fanompoana hahazoana antoka anao na inona na inona olana sy isaky ny mihaona, dia afaka mamaha mora foana. Mora ny miasa amin'ny olona amin'ny toromarika.
Ahoana ny momba ny entana?
Ny milina dia alefa ao anatin'ny 2-3 andro aorian'ny fandraisana ny fandoavam-bola.
Hifidy SHR IPL milina
Ultrashape 3D mifantoka fitarafana Fat fanesorana SL ...